တန်ဖိုးသင့်ဖုန်းတွေမှာ high-end feature တွေခံစားရစေမယ့် Snapdragon 710 chipset များ – DigitalTimes.com.mm
501 Shares 160 Views
Mid-range ဖုန်းတွေအတွက် Snapdragon 600 စီးရီးတွေ…high-end ဖုန်းတွေအတွက် SD 800 စီးရီးတွေထွက်နေတဲ့အချိန် Qualcomm ရဲ့နောက်အစီအစဉ်သစ်က ဘာများဖြစ်မလဲ??
ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ တန်ဖိုးသင့်ဖုန်းတွေအတွက် Qualcomm က Snapdragon 700 စီးရီးသစ်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်လို့ flagship ဖုန်းတွေမှာသာမြင်တွေ့ရတဲ့ high-end feature တွေကို တန်ဖိုးသင့်ဖုန်းတွေမှာခံစားနိုင်တော့မှာပါ။
သူ့ရဲ့ SD 710 SoC တွေကို 10nm process နဲ့ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပြီး AI engine ရော neural network processing တွေပါ ပါဝင်လာတဲ့အတွက် တန်ဖိုးကြီး flagship ဖုန်းတွေမှာသုံးထားတဲ့ SoC တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့သိပ်တောင်မကွာတော့ပါဘူး။ mid-range ထဲက Snapdragon 660 chipset တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ဒီ 700 series chip အသစ်တွေက AI ပိုင်းမှာဆို ၂ဆလောက်တောင်သာနေပါတယ်။
Task အကြီးကြီးတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ (Clock-speed 2.2GHz ရှိတဲ့) Kryo 360 [2 cores] နဲ့ သာမန် daily task တွေလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် clock-speed 1.7GHz ရှိတဲ့ Kryo 360 [6 cores] နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ octa-core CPU သုံးထားပါတယ်။ GPU အတွက်ကတော့ Adreno 616 GPU ကိုသုံးထားတာပါ။
ARM Cortex နည်းပညာပေါ်အခြေခံထားတဲ့ Kryo 360 ကတော့ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၂၀% တောင်ပိုမြင့်လာပြီး browse လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ၂၅% လောက်ပိုမြန်လာပါတယ်။ app တွေကိုဖွင့်တဲ့အချိန်ကလည်း ၁၅% လောက်ပိုမြန်လာပြီး AI အားသာတဲ့ chipset ဖြစ်တဲ့အတွက် AI application တွေမှာဆို ပိုမြန် ပိုတိကျလာပါတယ်။
ဂိမ်းကစားတဲ့အခါနဲ့ 4K HDR ဗီဒီယိုတွေဖွင့်တဲ့အခါမှာ ၄၀% လောက် အားပိုချွေတာနိုင်ပြီး ဗီဒီယိုတွေဆက်တိုက်ကြည့်ရင်တော့ ၂၀%လောက်အားကုန်သက်သာပါတယ်။ ဘက်ထရီမှာဆိုလည်း Quick Charge 4+ နဲ့သာဆိုရင် ၁၅မိနစ်လောက်အားသွင်းတာနဲ့ ၅၀% လောက်ထိတောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Snapdragon X15 LTE Modem ကိုသုံးထားပြီး Cat 15 LTE (800Mbps) အမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ 4×4 MIMO အပါအဝင် နောက်ဆုံးပေါ် 4G LTE ချိတ်ဆက်မှုတွေကို မြှင့်ထားတာကြောင့် လိုင်းဆွဲအားမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာတောင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနှုန်းက ၇၀% လောက်ပိုမြန်လာပါတယ်။
ဒီ SoC အသစ်မှာပဲ Qualcomm Spectra 250 ISP အသစ်တွေကိုသုံးထားတဲ့အတွက် ပရိုဆန်တဲ့ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ low-light မှာဖြစ်တတ်တဲ့ noise တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တာ, autofocus မြန်တာ၊ ပုံတွေကိုငြိမ်အောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်တာ၊ Zoom ဆွဲရအဆင်ပြေလာတာနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ bokeh effect တွေရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ပဲ မိုဘိုင်းလ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဆီ Qualcomm Snapdragon 710 SoC တွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ဒီစွမ်းရည်မြင့် chipset တွေကို တန်ဖိုးသင့်ဖုန်းတွေမှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ ဈေးအသင့်အတင့်ပေးပြီး high-end feature တွေသုံးချင်ရင်တော့ SD 710 chipset တွေက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Mid-range ဖုနျးတှအေတှကျ Snapdragon 600 စီးရီးတှေ…high-end ဖုနျးတှအေတှကျ SD 800 စီးရီးတှထှေကျနတေဲ့အခြိနျ Qualcomm ရဲ့နောကျအစီအစဉျသဈက ဘာမြားဖွဈမလဲ??
ထငျတဲ့အတိုငျးပါပဲ။ တနျဖိုးသငျ့ဖုနျးတှအေတှကျ Qualcomm က Snapdragon 700 စီးရီးသဈကိုထုတျလုပျလိုကျပွီဖွဈလို့ flagship ဖုနျးတှမှောသာမွငျတှရေ့တဲ့ high-end feature တှကေို တနျဖိုးသငျ့ဖုနျးတှမှောခံစားနိုငျတော့မှာပါ။
သူ့ရဲ့ SD 710 SoC တှကေို 10nm process နဲ့ဖနျတီးထုတျလုပျထားပွီး AI engine ရော neural network processing တှပေါ ပါဝငျလာတဲ့အတှကျ တနျဖိုးကွီး flagship ဖုနျးတှမှောသုံးထားတဲ့ SoC တှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျနဲ့သိပျတောငျမကှာတော့ပါဘူး။ mid-range ထဲက Snapdragon 660 chipset တှနေဲ့ယှဉျလိုကျရငျ ဒီ 700 series chip အသဈတှကေ AI ပိုငျးမှာဆို ၂ဆလောကျတောငျသာနပေါတယျ။
Task အကွီးကွီးတှလေုပျဆောငျနိုငျဖို့အတှကျ စှမျးရညျမွငျ့တဲ့ (Clock-speed 2.2GHz ရှိတဲ့) Kryo 360 [2 cores] နဲ့ သာမနျ daily task တှလေုပျဆောငျဖို့အတှကျ clock-speed 1.7GHz ရှိတဲ့ Kryo 360 [6 cores] နဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ octa-core CPU သုံးထားပါတယျ။ GPU အတှကျကတော့ Adreno 616 GPU ကိုသုံးထားတာပါ။
ARM Cortex နညျးပညာပျေါအခွခေံထားတဲ့ Kryo 360 ကတော့ စှမျးဆောငျရညျမှာ ၂၀% တောငျပိုမွငျ့လာပွီး browse လုပျတဲ့အခါမှာလညျး ၂၅% လောကျပိုမွနျလာပါတယျ။ app တှကေိုဖှငျ့တဲ့အခြိနျကလညျး ၁၅% လောကျပိုမွနျလာပွီး AI အားသာတဲ့ chipset ဖွဈတဲ့အတှကျ AI application တှမှောဆို ပိုမွနျ ပိုတိကလြာပါတယျ။
ဂိမျးကစားတဲ့အခါနဲ့ 4K HDR ဗီဒီယိုတှဖှေငျ့တဲ့အခါမှာ ၄၀% လောကျ အားပိုခြှတောနိုငျပွီး ဗီဒီယိုတှဆေကျတိုကျကွညျ့ရငျတော့ ၂၀%လောကျအားကုနျသကျသာပါတယျ။ ဘကျထရီမှာဆိုလညျး Quick Charge 4+ နဲ့သာဆိုရငျ ၁၅မိနဈလောကျအားသှငျးတာနဲ့ ၅၀% လောကျထိတောငျရောကျနိုငျပါတယျ။
Snapdragon X15 LTE Modem ကိုသုံးထားပွီး Cat 15 LTE (800Mbps) အမွနျနှုနျးကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ 4×4 MIMO အပါအဝငျ နောကျဆုံးပျေါ 4G LTE ခြိတျဆကျမှုတှကေို မွှငျ့ထားတာကွောငျ့ လိုငျးဆှဲအားမကောငျးတဲ့နရောတှမှောတောငျ ဒေါငျးလုပျဆှဲနှုနျးက ၇၀% လောကျပိုမွနျလာပါတယျ။
ဒီ SoC အသဈမှာပဲ Qualcomm Spectra 250 ISP အသဈတှကေိုသုံးထားတဲ့အတှကျ ပရိုဆနျတဲ့ဓာတျပုံ ဗီဒီယိုတှကေိုရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ low-light မှာဖွဈတတျတဲ့ noise တှကေို လြှော့ခပြေးနိုငျတာ, autofocus မွနျတာ၊ ပုံတှကေိုငွိမျအောငျထိနျးညှိပေးနိုငျတာ၊ Zoom ဆှဲရအဆငျပွလောတာနဲ့ ပိုကောငျးတဲ့ bokeh effect တှရေိုကျကူးနိုငျတဲ့အားသာခကျြတှရှေိပါတယျ။
ဒီနပေဲ့ မိုဘိုငျးလျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူတှဆေီ Qualcomm Snapdragon 710 SoC တှရေောကျရှိလာခဲ့ပွီဖွဈပွီး မကွာခငျမှာပဲ ဒီစှမျးရညျမွငျ့ chipset တှကေို တနျဖိုးသငျ့ဖုနျးတှမှော မွငျတှရေ့တော့မှာပါ။ ဈေးအသငျ့အတငျ့ပေးပွီး high-end feature တှသေုံးခငျြရငျတော့ SD 710 chipset တှကေ အသငျ့တျောဆုံးဖွဈမယျထငျပါတယျ။